Mihazakazaka ny fihanaky ny Covid 19 15 tao Toamasina, 3 tao Moramanga...
Niakatra ho 212 ny olona voa, ka 107 no efa sitrana, ary 105 kosa ireo manaraka fitsaboana. Tsy misy marary atahorana ny ainy. 15 tamin’ireo tranga vaovao dia tany Toamasina avokoa ka lehilahy ny 6 ary vehivavy ny 6; miisa 3 tao Moramanga ka lehilahy ny 2 ary vehivavy ny iray; lehilahy 2 kosa ny teto Antananarivo. 18 taona hita tany Toamasina ny zandriny indrindra, ary 67 taona ny zokiny indrindra izay tao Moramanga no nahitana azy. Tao anatin’ny herinandro dia tsy mitsahatra ny mitombo ny olona voa any Toamasina, ka niainga avy ao Ambatovy no niparitaka ny ankamaroany. Nahatezitra ny Filoham-pirenena ny mbola fivoahan’ny olona tao. 93 hatramin’ny niandohan’ny coronavirus ny voa tany Toamasina, ka 23 no sitrana, ary 70 mbola tsaboina avokoa. Avo roa heny amin’ny olona mbola tsaboina ny sitrana eto Antananarivo, ary efa mananika ny avo telo heny amin’ny sitrana kosa ny marary ao Toamasina. Tsindriana manokana I Toamasina noho zava-misy, kanefa tsy tokony ho varimbariana ny amin’ny toerana hafa, hoy ny Pr Vololontiana Hanta. Amin’ny maha tsimokaretina vaovao, dia sarotra ny mifehy azy, ka ilàna fitandremana, indrindra ho an’ny olona marefo. Ireny no tena mora lasibatra sy sarotra tsaboina, ary avy amin’ireo no tena betsaka namoizana ain’olona maro manerana izao tontolo izao, ka 2300 eo ny taty Afrika. Ny olona marefo no tena ilàna fameloman’aina avo lenta raha sanatria voa. Isika manana ny CVO, izay tambavy sotroina, fa mifameno amin’izany ihany koa ny fanajana ireo fepetra fa tsy hoe rehefa avy nisotro dia afaka mifampitakoson na koa tsy manasa tànana, hoy io manam-pahaizana io.